admin December 22, 2018 December 22, 2018 No Comments on DASTUURKA SOOMAALIYA PDF
Author: Gall Kajiktilar
Xoomaaliya kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha 1 Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Latest News English Somalia to develop a national communication strategy on preventing and countering violent extremism – Bisha Tobnaad 17, A password will be e-mailed to you. Prev Post Soomaaliya oo ka qeyb galeysa shir uu soo qaban qaabiyey Bangiga Adduunka.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Wasiirka oo BBC-da u warramay ayaa tilmaamay in go’aanka ugu dambeeya ee dastuurka uu iska leeyahay golaha ansixinta hase ahaatee marka hore guddiga madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ay soo dhammaystiraan hawshaas oo uu wasiirku sheegay in xilligan ay soo afjarantay ayna hartay oo keliya talooyinkii madaxda sare iyo saxiixayaasha Road mapka oo keliya markaa kadibna dastuurku u gudbi doono golaha ansixinta.
Soomaaliya oo ka qeyb galeysa shir uu soo qaban qaabiyey Bangiga Soomaaliya.
Mareykanka oo xayiraad ku soo rogay shakhsiyaad u dhashay Ruushka. Sida aad ka arkeysaan farqiga u dhaxeeya Axdiga iyo ansixinta Kumeel gaarka ee la ansixiyey Dastuurkan, waxaa uu soo jiitamayey ilaa ilaa 8 sanno in la helo qabyo qoraalka Dastuurka aan hadda haysano. Warka Subaxnimo Ee Radio Dalsan.
Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Qormadan gaaban waxaan u qorayaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago fahamkayga mudadii halka sano ku dhowaadka ahayd ee aan ka tirsanaa Guddiga La socodka dib u eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si aan u ifiyo meesha ay wax marayaan iyo caqabadaha jira. Soomaaliya waxaa ay soo martey taariikh Dastuur sameyn laga soo bilaabo xiligii xoriyadda.
Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Madaxweyne Farmaajo oo shir ugu qeyb dasthurka dalka Itoobiya. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Sign in Recover your password.
Baarlamaanka Federaalka waxaa uu doortey Guddi ka kooban 10 xubnood sida uu qabo qodobka aad ee Dastuurka. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Soomaqliya waxay sheegeen inay magaalada Garowe ugu laabteen dastuur,a inkastoo aanay si rasmi ah u sheegin waxa ay saluugeen haddana waxa muuqata inay ka biyo-diideen habka uu u socdo maamulka shirwaynaha odayaasha ee ka socda Muqdisho.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Haddii la qaato nidaamka dastuurka nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Mudane Khaire ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhameystiro geeddi-socodka dastuurka si dalka loo mideeyo, sarena loogu qaado kobaca dhaqaalaha iyo in la soo saaro dukumeenti cusub oo la isticmaali doono mustaqbalka.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Dawtuurka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Dhinaca kale qaar ka tirsan odayaashii dhaqanka Puntland ee ka qaybgalay kulankii furitaanka shirwaynaha Isimada Somaalida ee Muqdisho ka dhacay ayaa dhowaan dib ugu laabtay magaalada Garowe iyagoo sheegay inay saluugeen hanaanka ay wax u socdaan.
Balse waxaa la siimaraya in qabyada la dhameystiro 6 sano ayadoo aan weli la ogeyn goorta uu dhamaan doono.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu dastjurka dhammaaanayso. Sidoo kale qodobada iyo ayaa qaba in Dawlad goboleed kasta oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ay soomaakiya hal ergey ku soo darsadaan labada Guddi Guddiga Baarlamaanka iyo Guddiga Madaxbannaan. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Cabdi Maxamuud Cumar oo markale Berri Maxkamad la soo taagayo. Waxaa intaas dheer in dawlad goboleed kasta ay leedahay wasaarad dastuur iyo guddiyo Baarlamaan oo si gaar ah ay tahay inay dowr ku yeeshaan dib u eegista Dastuurka. Wassiirka la dastuurkz haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Safiirada qaramada xoomaaliya u fadhiya dalalka USA, UK, France iyo Germany iyo ergeyga UN ee somalia iyo madaxweynaha dawladda KMG ee somalia intuba waxay isku raaceen in taageerada caalamku ay shardi u tahay sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka August.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Shirweynaha qaran ee soconayo muddo seddax maalmood ayaa soomaalia bilowga geeddi-socod looga gol leeyahay in Soomaaliya loo yeelo dastuur cusub kaasi oo beddeli doono Dastuurka Ku-meel gaarka ah oo ay isku raaceen ergo oo ka tirsan Golaha Ergooyinka Qaranka. Shirkaan waxaa ka soo qaybgaley xubnaha baarlamanka, culimada, bulshada rayidka iyo bah-wadaagta caalamiga ah.
Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Mogadishu, 13 Maay — Soomaaliya ayaa maanta shirweyne qaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho ku daah-furtay geeddi-socodka dib-u-eegista dastuurka. You might also like More from author. Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Dastuurka hadda inoo yaala una baahan dib u eegista waxaa uu marayaa sanadkii 6aad oo uu keliya u baahan yahay dib u eegis iyo dhameystir shaqadii la soo qabtey Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.